Cygnus စျေး - အွန်လိုင်း CYG ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Cygnus (CYG)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Cygnus (CYG) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Cygnus ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
CYG – Cygnus
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Cygnus တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Cygnus များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CygnusCYG သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000457CygnusCYG သို့ ယူရိုEUR€0.000385CygnusCYG သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000347CygnusCYG သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000416CygnusCYG သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0041CygnusCYG သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00287CygnusCYG သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0101CygnusCYG သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0017CygnusCYG သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000607CygnusCYG သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000632CygnusCYG သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0102CygnusCYG သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00354CygnusCYG သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00245CygnusCYG သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0343CygnusCYG သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0771CygnusCYG သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000626CygnusCYG သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000685CygnusCYG သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0142CygnusCYG သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00318CygnusCYG သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0482CygnusCYG သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.541CygnusCYG သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.174CygnusCYG သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0335CygnusCYG သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0127
CygnusCYG သို့ BitcoinBTC0.00000004 CygnusCYG သို့ EthereumETH0.000001 CygnusCYG သို့ LitecoinLTC0.000008 CygnusCYG သို့ DigitalCashDASH0.000005 CygnusCYG သို့ MoneroXMR0.000005 CygnusCYG သို့ NxtNXT0.0325 CygnusCYG သို့ Ethereum ClassicETC0.00006 CygnusCYG သို့ DogecoinDOGE0.129 CygnusCYG သို့ ZCashZEC0.000005 CygnusCYG သို့ BitsharesBTS0.0175 CygnusCYG သို့ DigiByteDGB0.0167 CygnusCYG သို့ RippleXRP0.00149 CygnusCYG သို့ BitcoinDarkBTCD0.00002 CygnusCYG သို့ PeerCoinPPC0.00158 CygnusCYG သို့ CraigsCoinCRAIG0.203 CygnusCYG သို့ BitstakeXBS0.019 CygnusCYG သို့ PayCoinXPY0.00779 CygnusCYG သို့ ProsperCoinPRC0.056 CygnusCYG သို့ YbCoinYBC0.0000002 CygnusCYG သို့ DarkKushDANK0.143 CygnusCYG သို့ GiveCoinGIVE0.966 CygnusCYG သို့ KoboCoinKOBO0.1 CygnusCYG သို့ DarkTokenDT0.000421 CygnusCYG သို့ CETUS CoinCETI1.29